Galkacyo: Shir u dhamaaday Saraakiisha sare ee bilayska Puntland iyo guddiga amniga gobolka Mudug. – Radio Daljir
Galkacyo: Shir u dhamaaday Saraakiisha sare ee bilayska Puntland iyo guddiga amniga gobolka Mudug.
Galkacyo April 19 – Saraakiil bileys oo uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka bileyska iyo asluubta Puntland sarreeye-guuto Cali Nuur Cumar ayna ka mid yihiin kuxigeenkiisa Maxamed Siciid Jaqanaf iyo taliyayaal kale oo laamaha bileyska Puntland ayaa soo gaaray magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kuwaasi oo kulamo deg deg ah la bilaabay qaybaha maamulka ee gobolka iyo guddiyada nabad-galyada.
Waftigaan oo saaka aroortii soo gaaray magaalada Galkacyo ayaa kulamadoodii ugu horreeyey isla saaka-ba si wadajir ah ula yeeshay maamulka gobolka, midka degmada, guddiga nabad-galyada iyo saraakiisha laamaha amniga ee gobolka Mudug, waxaana kulankaasi oo xilli dhaw soo gaba-gaboobay looga arrinsaday xaaladda ammaan ee gobolka gaar ahaanna amniga magaalada Galkacyo oo in muddo ahba ay ka aloosnayd mushkilad lagu ugaarsanayey wax-galka bulshada gobolka.
Shirka maanta oo intiisa badan ahaa is xog-waraysi ayay Labada dhinac wax iskala soo qaadeen dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee gobolka ka dhacay iyo xal u heliddooda kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen dilkii Sh Ismaaciil Xaashi Xuseen oo qarax-miino lala bar-tilmaameedsaday Sabtidii aan soo dhaafnay iyo sidoo kale labo dhacdo oo ka danbeeyey oo ahaa weeraro lagu qaaday labo masaajid oo ku yaalla xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo, ayna ka dhalatay khasaaro dhimasho iyo dhaawac dadeed iskugu jira.
Duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud X Xasan oo aan waraysi kooban la yeelanay markii shirku dhammaaday ayaa caddeeyay jiritaanka go’aamo wax ku ool ah oo la iskula meel-dhigay kulanka maanta, kuwaasi oo ku aaddan sidii gacanta loogu dhigay lahaa amniga magaalada Galkacyo, caddaalladdana loo horkeeni lahaa dhagar-qabayaashii ka danbeeyey dilal is daba-jooga ah oo dhawrkii bilood ee ugu danbeeyey ka dhacayey magaalada Galkacyo.
Marka laga gudbo saraakiisha bileys ee maanta kulamada la yeeshay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo guddiga nabad-galyada ee isla gobolka, waxaa la tilmaamayaa in ay jiraan ciidamo kuwa amniga ah oo iyana soo gaaray magaalada Galkacyo, kuwaasi oo u soo kicitimay sidii ay u adkayn lahaayeen nabadda magaalada Galkacyo.
Imaanshaha waftiga saraakiisha bileyska ahi ay hoggaaminayaan iyo ciidamada amni ilaaliyayaasha ah ee soo gaaray Galkacyo ayaa ka danbeeyey kaddib markii magaalada Galkacyo in muddo ahba ay ka socdeen falal gurracan oo meel ka dhac ku ah amniga iyo nabadda gobolka, kuwaasi oo u badnaa dilal qorshaysan iyo qaraxyo abaabulan oo lala bar-tilmaameedsanayey wax ku oolka bulshada.
Cabdifitaax Cumar Geeddi,